Momba anay - Shenzhen Spocket Technology Co., Ltd.
Shenzhen Spocket Technology Co., Ltd. manana marika SpocketGuard ho mpanondrana lehibe ny rafitra fampisehoana manan-tsaina, fitaovana / vokatra anti-halatra ary kojakoja mifandraika amin'izany any Shenzhen, Sina hatramin'ny 2008, izay manome haino aman-jery fampisehoana anti-halatra & mpihazona POS, telefaona finday , latabatra PC, sns. Manolotra vahaolana malalaka momba ny vokatra sy ny kojakoja natao hamahana ny filanao fiarovana izahay.
Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny ekipa mpivarotra efa za-draharaha dia misy foana hiara-miasa aminao hahatakatra ny zavatra takinao, manome hevitra, torohevitra ara-teknika hahazoana antoka fa hahazo ny vahaolana mety indrindra ho an'ny fampiharana ianao.
Ny "kalitao tsara indrindra, ny trosa voalohany, ny voalohany ho an'ny mpanjifa" no fotokevitra lehibe indrindra eto aminay, raisinay amin-kitsimpo ny mpanjifa rehetra manantona anay amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka manerantany. Manantena fiaraha-miasa mahomby aminao izahay!
Marika manokana: Orinasa mpanondrana rahavavintsika mandritra ny 12+ taona. Greenlife Industrial Limited.
SPOCKET dia mitondra talenta sy teknolojia ambony matihanina mifandraika amin'ny ekipa matihanina tena mahay. Ny ekipanay dia misy ekipa fitantanana, dept Production, dept sales, R&D dept, QC dept, dept service aorian'ny fivarotana ary dept financial, toy ny fanitarana ny orinasantsika, raisinay ireo namana bebe kokoa eran'izao tontolo izao.
Fakan-kevitra mialoha ny varotra mialoha / Fanamarihana santionany amin'ny vidiny ambany
SPOCKET dia manolotra valiny mialoha ny varotra 12 ora sy hevitra maimaimpoana. Misy karazana fanohanana ara-teknika ho an'ny mpanjifanay.
Misy santionany amin'ny vidiny ambany sy fanaovana fanandramana. Afaka manome santionany tahiry maimaimpoana izahay, fa zakan'ny mpanjifa kosa ny entana. Ny entana avo lenta na santionany namboarina dia hangataka santionany santionany isaky ny fangatahana isan-karazany.
3-10 Andro fiasana Fandefasana haingana
Raha vantany vao tonga aty aminay ny volanao, dia hanao izay fara herinay izahay handefasana haingana ny mpanjifa rehetra. Ny tahiry sasany na ny entana efa vonona, dia manolotra 3-5 andro fotoana fitaterana haingana izahay. Ho an'ny fifanarahana namboarina dia hijery tsara ny zavatra takinao ianao ary hamokatra ny fifampiraharahana aminao amin'ny voalohany.
Fanaraha-maso henjana ny famokarana
Fanaraha-maso ny akora: Amin'ny faritry ny loacl misy, maro ny mpanamboatra akora ary mitazona ny fifandraisana tsara amin'izy ireo izahay, manana habetsahan'ny fividianana lehibe sy marimarina amin'izy ireo ary manome toky izy ireo fa hanome anay kalitao milamina. Izy ireo dia nandamina olona iray izay tsy tompon'andraikitra afa-tsy amin'ny famokarana sy ny fandefasana ny fitaovantsika mba hananana kalitao azo antoka.
Fanaraha-maso kalitao: Ny ivon'ny R&D dia misy milina fanandramana mandroso, mpiasa teknika matihanina toa QC ao amin'ny atrikasa sy QC amin'ny famonosana dept mba hamoronana rafitra fitantanana feno sy rafitra fanaraha-maso kalitao henjana, izay miantoka ny kalitaon'ny vokatra azo antoka.
Serivisy aorian'ny fivarotana 24 ora
Rehefa ilain'ny mpanjifa dia manome antoka izahay fa misy ny fotoana famaliana 24 ora sy ny fanohanana ara-teknika aorian'ny fivarotana.
Raha misy ny mpanjifa mitaraina momba ny vokatra na serivisy, dia halefanay amin'ny ekipan'ny serivisinay izany. Izy ireo dia hanao tatitra mivantana amin'ny mpitantana ny varotra anay. Matetika izahay dia hanao fivoriana miaraka amin'ny sampana famokarana, fividianana entana ary fonosana ao anatin'ny 24 ora, ary hamaly ao anatin'ny 48 ora miaraka amin'ny hevitra sy vahaolana.
Raha mila fanazavana misimisy kokoa, aza misalasala mifandray aminay! Raisinay amin'ny alàlan'ny mailaka ny fanontanianao: info@spocketguard.com, ary manantena ny hiara-miasa aminao.
Adiresy: 322, Tranobe A2 Complex, Guangqian Vil, Nanshan Dist, Shenzhen, Guangdong, 518055, Sina
Hotline manerantany: 0086-18123644002
Ora fiasan'ny birao: alatsinainy-zoma 9: 00-18: 00
Vonona ny hanompo anao 24 ora isan'andro, 6 andro isan-kerinandro.
Vonona ny hanafatra? Mifandraisa aminay IZAO!